Isiqalekiso sichasene nentsikelelo : kanti intsikelelo yimbonakaliso yenhlanhla yokuba umntu uqaliswa kwizicwangciso zikaThixo, isiqalekiso sisigxina sobutyebi obubi ngenxa yokuba umntu uyayichasa izicwangciso zikaThixo. UThixo unokuqalekisa umntu okanye isizwe sonke ngenxa yokuchasana nentando kaThixo. Umbingeleli unokuthuka umntu ngenxa yokuphula imithetho kaThixo. Ngokubanzi, abantu abafanayo abanegunya lokusikelela banalo igunya lokuqalekisa.
EBhayibhileni, amagama amathathu esiHebhere aguqulelwe ngokuthi "isiqalekiso." Into eqhelekileyo yindlela yokwenza isithethe esichazwa ngokuthi "siqalekisiwe" abo abaphulaphula imilinganiselo yoluntu echazwe nguThixo nesithethe. Okuqhelekileyo ngokuqhelekileyo ligama elisetyenziselwa ukukhupha ububi kuye nabani na ophula isivumelwano okanye isifungo. Ekugqibeleni, kukho iziqalekiso ezifunwa nje ukuba unqwenele ukuba umntu ogulayo afune, njengokuqalekisa ummelwane kwimpikiswano.
Iyintoni Injongo yokuthuka?
Ukuqalekiswa kungafumaneka kwiinkalo ezininzi ukuba akunjalo zonke izithethe zonqulo emhlabeni jikelele. Nangona umxholo wale ziqalekiso ungahluka, injongo yeziqalekiso kubonakala zihambelana ngokugqithiseleyo: ukuthotyelwa komthetho, ukuqinisekiswa kwemfundiso yezemfundiso, ukuqinisekiswa kokuzinza koluntu, ukuxhatshazwa kweentshaba, ukufundisa ngokuziphatha, ukukhuselwa kweendawo ezingcwele okanye izinto, njalonjalo .
Ukuqalekisa njengomThetho weNtetho
Isiqalekiso sichaza ulwazi, umzekelo malunga nesimo somntu okanye sezenkolo, kodwa kubaluleke kakhulu "isenzo senkulumo," oko kuthetha ukuba yenza umsebenzi.
Xa umfundisi uthi kwisibini esithi, "Ngoku ndithetha wena ndoda nomfazi," akayikuthetha nje into, utshintshe isimo sezenzo zabantu phambi kwakhe. Ngokufanayo, isiqalekiso ngumsebenzi ofuna umntu ophethe igunya kunye nokwamkelwa kweli gunya ngalabo abaphulaphulayo.
Nangona ixesha elichanekileyo lingasetyenziswa ngokubanzi kumongo ongumKristu, le ngcamango idlala indima ebalulekileyo kwimfundiso yobuKristu. Ngokwesiko lamaYuda, uAdam noEva baqalekiswa nguThixo ngenxa yokungathobeli kwabo. Bonke abantu, ngokwesiko lobuKristu, ngoko baqalekisiwe ngeSono Sokuqala . UYesu, uthabathela esi siqalekiso kuye ukuze akhululwe uluntu.
Ukuqalekisa njengoMqondiso wobuthathaka
"Isiqalekiso" asikho into ekhutshwe ngumntu onempi, yezopolitiko okanye yamandla phezu komntu oqalekisiwe. Omnye onalo hlobo lombuso uya kulusebenzisa rhoqo xa ezama ukugcina umyalelo okanye ukuhlwaya. Izikhalazo zisetyenziswe ngabangenawo amandla amaninzi asekuhlaleni okanye abangenawo amandla phezu kwabo bafuna ukuqalekisa (njengotshaba olomeleleyo lomkhosi).
Iiprogram ezisebenzayo zokukhuthaza ukuKhuseleko kweSikolo
Izwe eli-Easy Easy Iingoma nawuphi na umntu onokufunda kwiGititar